IGBANWO AHA OGBE ABAKALIKI N’ỌKA: ONYE EMELA IHE NA-ESE OKWU – hoo!haa!!
IGBANWO AHA OGBE ABAKALIKI N’ỌKA: ONYE EMELA IHE NA-ESE OKWU
N’ isi nso a ka ozi na-aga aka nri nakwa aka ekpe na ewepula Abakaliki dịka aha otu ogbe (Abakaliki Street) na Ọka bụ isi obodo steeti Anambara.
Akụkọ na-ekwu na ihe butere nke a bụ na ogbe ahụ emepola na ụdị ịkpọ ya ‘Abakaliki Street’ ga-abụ ihe nleda anya.
Akụkọ ọzọ na-ekwu na-emere nke a n’ihi na Abakaliki so n’obodo ndi eji ‘Wawa’ were mara. N’ihi ya ọ dịghị mma ịdị n’ebe pụtara ihe na steeti Anambara, tinyekwara ihe ndi ọzọ.
Nke ọ sọkwara ya bụrụ n’ime ihe ndi a, anyị na-ahụta ụdi akparama agwa a dịka iyi mma n’ụdọ ịdị n’otu jikọrọ Naijiriya ọnụ bịa bụrụzia mmadụ ịkpacha anya chọọ nwanne ya okwu n’akụkụ nke anyị ji bụrụ ndi Igbo.
Igbanwo aha ogbe n’ala anyị abụghị ihe ọjọọ nke oji abụ ihe ọhụrụ. Mana ihe nke a ji dịke ọ dị ime ma kwọrọkwa nwa n’azụ, bụ ihe bụ isi okwu eji maka ya mee yabụ mgbanwo.
Anyị na-ahụta ndi Igbo dịka otu ụmụnne nakwa otu agbụrụ na-agbanyeghị akụkụ onye si n’ala Igbo. N’uche anyị, otu akụkụ ala Igbo mepee, ọbụ ihe inya isi dịrị ndi Igbo niile. N’akụkụ nke ọzọ, onwere akụkụ ala Igbo na-ala azụ, anyị hụrụ ya dịka oke na ọrụ dịịrị ndi Igbo ndi ọzọ inye aka maka mmepe ụdị ebe ahụ. Ọ kaghị mma igosi ndi nke ahụ akpam oke mọbụ ịkpọwa ha aha nleda anya.
Ọ bụ nke a kpatara na ndi Igbo niile na-ebe akwa n’ihi na akụkụ Naijiriya ndi ọzọ (zones) nwechara steeti isii isii mana mpaghara nke anyị bụ ndi Igbo nwere nanị steeti ise. Anyị na-ebe akwa maka nke a n’ihi na okweghị ka mmepo anya rutechaa ebe okwesịrị irute n’ala Igbo. Anyị bịa kpasowe onwe anyị ụdịrị agwa nleda anya dị otua, kedu ka aga-esi mara na akwa anyị na-ebe si anyị n’obi?
Anyị bụ ndi nwe ọbà kpọọ ọbà anyị mkpọkọrọ, kedu ihe ndi agbata-obi anyị ga-eji ya mee? Ọsịsa nke a dị nfe, dịkwa nso: ha ga-eji ya kpoo ntụ.
Abịa n’akụkụ ala anyị ndi ọzọ, enwegasịrị ogbe nakwa ụzọ eji aha obodo nakwa ụmụ afọ ndi Igbo mara dịka ‘Enugu Road Kano’, ‘Igbo Road Kano’, ‘Nnamdị Azikiwe Road Kaduna’ nakwa ndi ọzọ. Ọ bụrụ na ndi steeti ndi a nakwa ogbo ha ndi ọzọ esoro ụkpụrụ nleda anya dị etu a were gbanwoo aha ogbe na ụzọ ndi a, kedu ihe anyị ga eme dịka ndi Igbo?
Biko ndi ọgbakọ Ọhaneze Ndigbo, kabanụ ahụ leba anya n’okwu a. Ejighị ose eje ebe ana-agwọ anya odo. Onye mara ihe ga-ese okwu ya emena ya, n’ihi na anyị bụ ndi Igbo bụ ótú.
Previous Post: IWE/NDIDI/NWAYỌ
Next Post: AKA KPARA NDI AGHA ISIS ABỤỌ N’ABUJA